Fikojakojana amin'ny heloka bevava any Emirà Arabo Mitambatra: Tamberin'andraikitra amin'ny heloka bevava ho an'ireo antoko voarohirohy
Ny abetting dia midika hoe asa manampy na mamporisika olona hafa hanao heloka bevava. Lalàn'ny tsikombakomba izany. Ohatra, mikasa handroba banky misy an'i X ny namana roa, X sy Y. Araka ny drafitra, X, mpitahiry vola ao amin'ny banky, ary olon-tsotra iray dia hanome ny vault amin'ny banky na fitambarana azo antoka ho an'i Y handroba ny banky.
Na dia hanao ny tena fandrobana aza i Y ary tsy hanampy azy fotsiny i X, dia meloka ho nanao heloka bevava i X. Ny lalàna dia sokajian'ny X ho mpiray tsikombakomba. Mahaliana fa tsy voatery ho eo amin'ny sehatry ny heloka bevava i X vao ho meloka tamin'ny fandikan-dalàna. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, misy mpiray tsikombakomba mihoatra ny iray miaraka amin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fandraisana anjara amin'ny heloka bevava.
Ny fitsarana dia tsy maintsy mandinika ny tamberin'andraikitra amin'ny heloka bevava ataon'ireo antoko manokana voakasik'izany amin'ny heloka. Amin'ny ankapobeny, ny antoko sasany dia manohana na mamporisika fotsiny ny fanaovana ny heloka bevava nefa tsy misy fandraisana anjara mivantana. Ny hafa dia mandray anjara mivantana nefa tsy manao ny heloka bevava. Ny fampanoavana dia mila manavaka ny fomba anampian'ny antoko samihafa ny mpanao heloka bevava sy ny fanenjehana azy.
Emirà Arabo Mitambatra (UAE) Lalàna momba ny fanekena ny heloka bevava amin'ny lalàna heloka bevava
Abetment of Crimes ary ny fanitsakitsahana mifandraika amin'izany, anisan'izany ny fanampiana, dia heloka bevava eo ambanin'ny fehezan-dalàna famaizana UAE. Lalàna Federaly laharana faha-3 tamin'ny 1987 momba ny fehezan-dalàna famaizana dia manome toe-javatra maromaro izay azo sokajiana ho mpiray tsikombakomba ny olona iray, ao anatin'izany:
Raha miray tsikombakomba na manampy heloka bevava izay mitranga aorian'ny asany ilay olona
Raha miara-miasa amin'ny hafa hanao heloka bevava izy ireo ary misy heloka bevava toy izany aorian'ny firaisana tsikombakomba amin'ny heloka bevava
Raha mamporisika, manampy, na manamora ny fanomanana na ny famitana heloka bevava izy ireo. Ny fanamorana dia mety ahitana fanahy iniana manome ny fitaovam-piadiana na fitaovana ilaina ho an'ny nahavanon-doza hanao heloka bevava toy izany.
Araka izany, ny fikojakojana amin'ny heloka bevava ao amin'ny lalàna Emirà Arabo Mitambatra dia mitondra ny mpiray tsikombakomba amin'ny fomba itondrany ilay nahavanon-doza, anisan'izany ny fanasaziana azy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny mpiray tsikombakomba amin'ny mpiray tsikombakomba dia sazy mitovy amin'ny tena nahavanon-doza. Araka ny Andininy faha-47 amin’ny fehezan-dalàna famaizana, olona iray hita teny amin’ny toerana nitrangan’ny heloka bevava dia mpiray tsikombakomba amin’ny antony. Mifanohitra amin'izany kosa, izay olona mandray anjara mivantana amin'ny famolavolana ny heloka bevava dia mpiray tsikombakomba mivantana na dia tsy eo amin'ny toerana misy ny heloka bevava aza.
Ilay lalàna mifehy ny firaisana tsikombakomba amin'ny firaisankina amin'ny heloka bevava dia manome tranga maromaro izay manasokajy olona iray ho mpiray tsikombakomba mivantana na ho heloka bevava na lalàna ao UAE, ao anatin'izany:
Raha manao ny heloka amin’olon-kafa izy ireo
Raha manampy na mandray anjara amin'ny heloka bevava izy ireo ary minia manao ny iray amin'ireo hetsika marobe amin'ny heloka bevava
Raha manampy na fanahy iniana manampy olon-kafa izy ireo dia manao fihetsika toy izany, eny fa na dia any amin'ny toerana iray aza ny olona iray dia mandositra ny andraikitra na inona na inona antony.
Ny lalàna koa dia manome ohatra izay manasokajy olona iray ho mpiray tsikombakomba amin'ny antony, ao anatin'izany:
Raha mamporisika na mandrisika olona hafa hanao heloka bevava izy ireo
Raha tafiditra ao anatin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny vondron'olona iray izy ireo ary mitranga araka ny efa nomanina ny heloka bevava.
Raha manome fitaovam-piadiana na fitaovana hanampiana ny mpanao heloka bevava izy ireo
Tsy toy ny mpiray tsikombakomba mivantana, ny mpiray tsikombakomba amin'ny antony dia tsy maintsy eo amin'ny toerana misy ny heloka bevava. Raha tsy milaza ny mifanohitra amin'izany ny lalàna, dia samy mihevitra ny mpiray tsikombakomba amin'ny antony sy ny mpiray tsikombakomba mivantana ny fitsarana, anisan'izany ny fanasaziana azy ireo ho toy ny tena nahavanon-doza.
Na izany aza, ny fampanoavana dia tsy maintsy mamaritra raha misy mpiray tsikombakomba amin'ny antony nanao heloka bevava. Raha tsy afaka manaporofo ny fampanoavana fa nikasa hanao heloka bevava ilay olona hita teo amin'ny toerana misy ny heloka bevava, dia handositra ny andraikitra amin'ny maha mpiray tsikombakomba azy ilay olona. Amin'ny ankapobeny, ny fanaporofoana ny fisian'ny heloka bevava amin'ny tranga misy mpiray tsikombakomba amin'ny antony mahatonga ny heloka bevava dia manakiana ny lalàna mifehy ny firaisana tsikombakomba amin'ny heloka bevava.
Na izany aza, tsy azo ampiharina na azo afindra amin'ireo mpiray tsikombakomba amin'ny heloka bevava ny mety hisian'ny fanalana andraikitra na sazy ho an'izay voarohirohy ho mpiray tsikombakomba aminy. Amin'ny ankapobeny, ny mpiray tsikombakomba rehetra dia enjehina tsirairay ary araka ny anjara asany manokana amin'ny asan-jiolahy. Na izany aza, raha voaheloka dia mihatra amin'ny sazy mitovy avokoa izy rehetra. Amin'ny ankapobeny, ny sazy ho an'ny mpikomy any Emirà Arabo Mitambatra dia ahitana ny fanagadrana na fanagadrana.
Fametrahana fikomiana mpanao heloka bevava mpiray tsikombakomba amin'ny fikojakojana ny heloka bevava
Na dia eo aza ny fahasarotana amin'ny fanenjehana ny raharaha momba ny fanitsakitsahana, ny tombontsoa voalohany amin'ny fitsarana dia ny fametrahana ny fikasan'ny mpiray tsikombakomba amin'ny heloka bevava ary ny mety ho antony mahatonga ny heloka bevava amin'ny fanekena azy ireo. Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, ny lalàna dia manasazy izay olona meloka ho miray tsikombakomba amin'ny heloka bevava mitovy amin'izany ary amin'ny maha-mpanao heloka bevava azy na inona na inona anjara asany amin'ny heloka bevava.
Raha manahy ianao sao nanao heloka bevava na notazonin'ny polisy, a Mpisolovava mpanao heloka bevava UAE afaka manoro anao ny zonao sy ny adidinao. Manome serivisy mpisolovava manam-pahaizana sy mpanolo-tsaina ara-dalàna manerana an'i Emirà Arabo Mitambatra, ao anatin'izany i Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah, Fujairah, RAK, ary Umm al Quwain. Raha miatrika fiampangana heloka bevava any Dubai ianao na any an-toeran-kafa any UAE, dia afaka miantehitra amin'ny fahaizanay sy za-draharaha Emirati mpanao heloka bevava mpisolovava any Dubai hiaro anao amin'ny fitsarana.